Cristiano Ronaldo oo Si Cad uga hadlay Sababtii uu uga soo tagay Real Madrid – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo Si Cad uga hadlay Sababtii uu uga soo tagay Real Madrid
(Juventus) 29 Okt 2018. Laacibka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa ka baxay aamusnaanta, kadib markii uu ka hadlay sababtii uu kaga dhaqaaqay kooxda Real Madrid suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Hadalka Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu imaanayaa kadib guuldaradii kooxda Real Madrid kaga soo gaartay kulankii xalay El Clasico ee ka dhacay garoonka Cump Nou.
“Hadii go’aankii aan kaga tagay Real Madrid uu la xiriiri lahaa lacag darteed, waxaan u wareegi lahaa dalka Shiinaha, halkaasoo aan ka heli lahaa 5 jibaar mushaarka aan haatan ka qaato kooxda Juventus ama Real Madrid”.
“Uguma biirin kooxda Juventus sababa la xiriira dhaqaale, sababtoo ah wax badan ayaan ka helay Real Madrid, Juventus runtii way i dooneesay, waxayna ii muujisay xiisaha iyo ixtiraamka aan si tartiib ah ugu lumay Madrid”.
“Go’aankeyga inaan ka tagayo Real Madrid ma ahayn sababa la xiriira bixitaanka Zidane, balse waxay ila noqotay in yara ay ila wanaagsan tahay u dhaqaaqista meel kale”.
“Waxaan ku soo noolaa Real Madrid mudo 9 sano ee cajiib ah, isla markaana ay ka buuxaan waqtiyo aan la rumeysan karin, ma ilaabi karo jamaahiirta iyo saaxiibadey, mar walbana waan ku faani doonaa inaan u soo ciyaaray kooxdan weyn, laakiin waa lagama maarmaan in is badal la sameeyo, isla markaana loo dhaqaaqo meel kale”.
Julen Lopetegui oo layliyay Real Madrid tababarkiisii ugu danbeeyay +SAWIRRO
Cristiano Ronaldo oo si xun u Weeraray Florentino Perez